Best HIIT trainer app for your flexible - Method Makia
Kukwirira kwakadzidziswa kudzidzira kumba kwekufamba uye kuchinja
Kudzidzira kudzika kunokosha zvikuru. Nokufamba kwenguva ruzivo pamusoro pezvibatsiro zvekufambisa huro huri kuwedzera zvishoma nezvishoma. Kufamba kwakanaka kunokuchengetedza kubva kukuvara uye kunowedzera hutano hwako hwose uye simba - build network at home.
Chii Chinonzi Kudzidzira Kubudirira? Ndiani Angabatsirwa Nayo?
Method Makia iri pamusoro peMushamba uye Flexibility. Kutsigira kunoreva huwandu hwekufamba kwechimwe chekubatana. Kufamba kunoreva kutungamira uye kutonga kwehuwandu hwekufamba kwesangano. Kune vanhu vane mafungiro akaoma, asi vangave vachiwana zvakaoma kuita chidimbu chakasvibiswa nehutano hwavo chete. Kuve wakasununguka uye kuva nekufamba zvakanaka zvinhu zviviri zvakasiyana.
Kubudirira Kudzidzira Kubatsira Munhu wese
Kudzidzira kusimba kunogona kubatsira munhu wose. Izvi zvinoreva kuti zvakakosha kuita kuenderera mberi kwekudzidzisa kubva pane zvaunoda. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuva nyika-class sprinter, hazvisi zvinobatsira kuita zvakawanda. Kakawanda uye kupararira kwakadzika kune zvakakonzera kuderedza kusimba kwemaviri. Asi sechikamu cheMethod Makia, kukwanisa kuita kuparadzanisa kuchakubatsira zvikuru kuti uwane simba rekufamba.
Dynamic uye Isometric Yakananga
Zvechokwadi, sprinter inokurudzirwa kuita zvishoma zvisingatauri kutarisa uye kuisa pfungwa pakuchengeta mishonga yake "kuvhura" nokuita kushanda. Kugadzirisa zvakasimba, isometric kutambanudza, uye kusanganiswa kweizvi zvose inzira dzakakosha dzekusimudzira kukwanisa kwemuviri kuita. Havasi nguva dzose kuwedzera hurefu hwemitsipa, asi panzvimbo pacho vanonyanya kugadzirisa mitemo, mitemo, uye inhibition.
Kugadzirisa kusimba kunotungamirirwa kutarisa kunoenderera mberi, e. g. , technically-focal squats deep under the body body weight. Isometric kutambanudza ndiko kutambanudza kunokonzerwa nemabasa emusumbu, e. g. , apo paimire pakatambanudza-kukonzera kupatsanurana nzvimbo. Aya mazano ekubatanidza anosanganisira kusagadzikana-nzira yekuzorodza uye kukanganisa-kunonoka + kushanda-kutambanudza.
Passive kutambanudza ndiyo iyo inowedzera urefu hwakawedzera kumasumbu. Misumbu inofanirwa, zvisinei, iite "yakasununguka" yekutora kutarisa kuti ibudirire. Misungo inogona kuchengetwa "yakasununguka" kunyange kana iwe uchiita kudzidziswa kwakasimba kuburikidza nekuita kushingaira kwekuita maitiro.
Kupeta kutadza kunoreva kuva wakasununguka apo uri pakatarisa, e. g. , amire uye achikotamira mberi. Zvechokwadi, kutarisa kutadza kunofanira kuiswa mukurovedza apo chinangwa chenyu ndechekuwana huwandu hwekufamba.
Ngozi inobatanidza kunyanya nekureba (30+ sec) kwete kutenderera ndeyokuti mishonga 'yekudzivirira kuvhara kunoderedzwa zvakanyanya uye izvi zvinoguma nekudzikisa kuderedza kufamba, kunyanya pamatunhu akakurumbira. Kana izvi zvikaitika, njodzi yekukuvadzwa inowedzera zvose kana kutarisa uye mune zviito zvose apo kufamba kunofamba kana kunogona kuenda, pedyo nemashoko akakwirira. Nokuda kwechikonzero ichi, kutarisa kwakasununguka kunofanira kusanganiswa nemaitiro ekuvandudza kushandiswa kwesangano. Iyi nheyo inoita basa guru muMet Makia apo pane chidikanwi chezvinhu zviviri zvakasiyana-siyana uye kufamba zvakanaka kwekutungamira.
Kudzidzisa Simba Kunobatanidza Chikwata Chizere Chekufamba
Dzimwe nguva kufambira mberi kwekufamba kunogonawo kunobatsira zvikuru nekudzidziswa kwakakwana kwekudzivirira simba. Semuenzaniso, masero e-infraspinatus emapfudzi anowanzowedzera mumamiriro ezvinhu asina simba zvokuti kufamba kwefudzi kunogona kudziviswa. Kana izvi zvikaitika, kana masimba aya achienda kunzvimbo yakatambanudza vanoona kuti mamiriro asingadziviriki ari kuswedera pedyo uye "inorova mabheki".
Unofanirwa kutanga kufamba kwekufambisa zvishoma, kunyange chete nokuda kwekusimudzirwa! Apo vamwe vanhu vanonzwa shoko rokuti "kutambanudza", vanorishamwaridzana naro nekurwadziwa nekunyangadza.
Zvisinei, kutora mafambiro hakufaniri kukonzera marwadzo, uye haasi chaiwo chinhu chakaipa. Kana iwe uchifanira kumanikidzira kuita chimwe chinhu, muviri wako unowana shoko rekuswedera kune ngozi, uye mugumisiro hauna kunaka. Paunenge uchiita zvisingatauriki, iwe unofanira kuedza kuisa pfungwa pakuwana nzvimbo yekuzorodza, uye kana kuita zvakasimba kutambanudza kuchengetedza kunonyanya kukosha.
Kushandiswa Kwemazuva Akasiyana-siyana
Makia Makia-kudzidzisa inosanganisira kudzidzira kuenderera mberi kwekudzidzira. Munzvimbo dzakawanda, simba rekudzidzira rinokura kuburikidza nega, asi izvi zvinogona kuitwa zvakanyanya kuburikidza kuburikidza nekuparadzanisa kufamba kwekudzidzira.